Nepomuk: iyo semantic KDE desktop | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Updated on 28/01/2015 00:21 | Zvimwe Linux, Resources
Ini handisi kuzonyepa iwe: chii chaindifarira nezvangu NepomukKunyangwe ndisati ndaziva kuti chaive chii, yaive logo yake diki (munoziva, pastel mavara, pingi uye sirivheri: chinhu chemusikana). Mushure mekutsvagisa logo, ndakaisa pfungwa pachigadzirwa ... Nepo chii?
Nepomuk es "Mhinduro ye KDE kune desktop semantic". Inosanganisira framework kugadzira uye kubvunza metadata yemhando ipi neipi yesimba.
Ngatiendei kuWikipedia kuti tinatsiridze chii metadata
Metadata (wepa ChiGiriki μετα, chinangwa, "Mushure" uye ChiLatin datum, «Chii chinopihwa», «dato»), Chaizvoizvo« nezve data », idhata inotsanangura imwe data. Kazhinji, boka re metadata rinoreva boka re data, rakadaidzwa kudzokorora. Pfungwa yemetadata yakafanana nekushandisa indexes kutsvaga zvinhu panzvimbo yedata. Semuenzaniso, raibhurari inoshandisa matabhu anotsanangura vanyori, mazita, vaparidzi, nenzvimbo dzekutsvaga mabhuku. Nekudaro, metadata inobatsira kutsvaga data.Kune dzakasiyana nzvimbo dzekomputa, senge kudzoserwa kweruzivo kana semantic webhu, metadata mumataki inzira yakakosha yekuvhara iyo semantic renji.
Zvakanaka, kana zvangobviswa, ngatidzokerei kwazviri. Nepomuk. Chii chichandiitira? Kuti uwane zviwanikwa kuburikidza metadata iyo inogona kana isingasvike nyore (kana pachena) kune akajairika mushandisi.
Kana isu tichitaura nezve metadata, tinogona kuiisa mumapoka matatu makuru:
Metadata yakagadzirwa nemushandisi (semuenzaniso, ma tag kana zviyero izvo zvatinowanzo kuwedzera kune mp3's).
Metadata isingagone kuwanikwa nyore nyore.
Mune yekupedzisira ndipo patinogona kutora mukana wechokwadi wekunongedzera nekuisa zvikamu nemetadata, ndiko kuti, kushandisa semantic desktop.
Mushandisi anotora chinongedzo cheemail. Kana chibatiso chikachengetedzwa kudiski, mareferenzi evose vakatumira email uye uri kubva kwakatorwa email.
Chizvarwa chematanho ekushandisa, mafaera, nezvimwe. yevashandisi. Semuenzaniso, ndiani mushandisi anonyora zvakanyanya kudiski sda1? Ndeupi mushandisi ane huwandu hwakanyanya hwemapaketi akagashirwa?
Nepomuk inonyanya kunyorwa ne Soprano, Strigi uye K MetaData. soprano chimiro chakatarisana nechinhu che RDF data y Strigi iri nyore diki rekutsvaga daemon. KMetaData raibhurari iyo inofambisa kuwana metadata.
Parizvino unenge wave kuita dzungu nedudziro uye mazwi asinganzwisisike, asi imwezve tsananguro kujekesa: Ndezvipi RDF data?
Ipo XML iri mutauro wekuenzanisira data, RDF mutauro wekutsanangudza metadata. XML inokundikana mukukanganisa kwedata sezvo marongero ezvinhu zvacho asiri echisikigo uye kuigadzirisa kwacho kwakaoma uye kuchidhura, zvinopesana, R.F.D. o Resource Tsananguro Sisitimu (RDF) inobvumidza kudyidzana pakati pezvishandiso zvinoshandura ruzivo runonzwisisika pane peji rewebhu, kupa zvivakwa zvinotsigira zviitiko zvemetadata.
Así izvo, zvakadaro, kushandiswa kwerudzi urwu rwezvishandiso kunotibvumidza ku:
Wana ruzivo "rusingaonekwe" uye pamunwe wako nezve data riri paPC yako. Semuenzaniso, fungidzira vashandisi vechirongwa avo, nekuverenga iyo sosi kodhi yechishuwo chavo chavanofarira, vanogona kuwana ruzivo nezve chimiro chevapurogiramu vakaigadzira.
Iko kugona kwevane mamaneja emapakeji kunogona kuwedzerwa zvakanyanya nekushandisa zvakanyanya iyo yakapfuma meta-ruzivo rwuri mumapakeji (semuenzaniso .deb's). Kugona kuipa kukosha kwesemantic kunogonesa kugadzirisa kweanotsamira kana kunetsana. Inobatsira. Kunyangwe usati wagadzirisa kumwe kukakavara (kazhinji mushandisi anobvunzwa kuti asimbiswe), inogona kubvunza ruzivo rweiye meta yemushandisi uye kugona kupa iko kusimbiswa kweye kugadzirisa gakava iri. Izvi zvinogona kubatsira, asi handisati ndanyatsogutsikana.
Tichishandisa Strigi takabatana nezvimwe zvinoshanda zveLinux kernel (senge Inotify subsystem) isu tinokwanisa kudzokorodza mafaira akachengeterwa uye kuchengetedza kuchengetedza nguva nenguva mukutsvagisa kwese faira system. Pano mashandisiro anogona kuburitsa yakawanda metadata zvine chekuita nesystem log uye sezvo matanda ari akajeka mavara mafaira… inogona kushandiswa.
Mhedziso: Kana iwe, mudiwa muverengi shamwari, shandisa KDE 4 iwe yaunogona kupa Nepomuk. Zvinotora kanguva kukohwa mabhenefiti (fungidzira kunongedzera uye kutsvaga metadata mune ese mafaera pasisitimu…) asi ini ndinofungidzira kuti nekuenderera kwekushandisa, chishandiso chine simba kwazvo.
Ndinovimba wanzwisisa, ndinokusiya uye ramba uchiedza ichi chishandiso chikuru.
P.S: zvakaoma kwazvo tsvaga ruzivo nezve Nepomuk kuti yakanyorwa mumazwi anonzwisisika uye kwete muchiSanskrit chekare semamwe mawebhusaiti… Nerombo rakanaka, ini ndakawana ichi chinyorwa muInfosofia senge chirevo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Nepomuk, iyo KDE semantic desktop
Rega tione kana ndinonzwisisa. Zvingaite sekuisa "zvinyorwa" pane edu mafaera?
Ngatitii chingave chimwe chinhu sekuisa mavara pazvinyorwa uye kushandisa zvakanakira izvo zviwanikwa izvi zvave nazvo, kunyangwe ukasazviona neziso rakashama, pane ruzivo rwakawanda rwakajeka mune zviwanikwa iyo inogona kushandiswa nemidziyo yerudzi urwu. yakawanda.
@gss: Kugamuchirwa kune hupenyu hweanotaura !! :)
… Ichokwadi nezve semantics muchirongwa chinhu chakanakisa kuona sehurongwa hwakangwara hwemangwana… 
Ndinovimba kudaro, zvingave zvinobatsira.
Mhoroi, kana ndisina kukanganisa, aka ndekekutanga kupindura.
Yakanaka kwazvo posvo, chokwadi ndechekuti iyi semantics muchirongwa yakanaka kwazvo maonero seakangwara epurogiramu yemangwana
Kwete mafaera chete, asi maforodha, zvirongwa zvese, dhatabhesi, mashandisiro, mapeji eInternet, nezvimwewo ...
Chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti izvi zvichaisa pfungwa ye "dura" padivi padiki kufunga nezve "maraibhurari", ine metatags nevamwe.
Chokwadi chinoratidzika kwandiri semupiro wakanaka kwazvo, (uye apa ndipo pane vanoverengeka vari kudaidzira), zvakada kufanana nezvinoitwa naSe7en neinjini yake yekutsvaga.
Pindura kune gss